Izindaba - Izinzuzo ze-villa yensimbi elula
Kunezizathu ezijulile zokuthi kungani uhlelo olukhanyayo lwensimbi villa, kufaka phakathi izindlu ezinesitezi esisodwa nezinezitezi eziningi, lukhula ngokushesha okukhulu. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zezindlu zensimbi, i-TUOOU light steel integrated system system, ikakhulukazi eyakhiwe ngamakhaza abiyelwe ngodonga lwensimbi ekhanyayo, inezinzuzo ezithile eziyingqayizivele:
(1) ukukhanya kwe-villa villa ukukhanya, amandla aphezulu, ukusebenza kahle kokuzamazama komhlaba, ukuphepha okuphezulu. Isakhiwo ngokwaso sikhanya kakhulu, kuphela isigamu sesisindo sesakhiwo sikakhonkolo.
(2) izingxenye zesistimu yokukhanyisa insimbi elula kanye nezesekeli zokukhiqizwa kwefektri nokusetshenziswa kwemishini, izinga eliphakeme lezentengiselwano, okulula ukufeza ukusebenza kwezezimboni, ezemboni, kunganciphisa umjikelezo wokwakha
(3) Indawo yengxenye yento incane, engakhuphula indawo esebenzayo yesakhiwo cishe nge-8% uma kuqhathaniswa nesakhiwo sikakhonkolo. Uphahla lisebenzisa isakhiwo sensimbi yensimbi, esingakha uphahla olucebile nolunezinhlangothi eziningi, ukubukeka okuhle, nokuhlangabezana nezidingo zomuntu uqobo zesakhiwo.
(4) Amanzi namapayipi kagesi angaphakathi angangcwatshwa odongeni, ngokuhlelwa okuguqukayo nokuguqulwa okulula. Kufanelekile ukwamukela ukuvikelwa kwemvelo nokonga odongeni lwamandla, isilebhu phansi nophahla lwephaneli ngokuqukethwe kobuchwepheshe obuphezulu, futhi kunomphumela omuhle wokonga amandla.
(5) Umsindo omncane wokwakhiwa kwensimbi yensimbi incane, imfucumfucu yokwakha encane, izinto ezisetshenziswayo ikakhulukazi ezingasetshenziswa kabusha noma izinto ezibolayo, ezilungele ukuvikelwa kwemvelo, ngokuhambisana nezidingo zesakhiwo esiluhlaza kanye nentuthuko esimeme, kungokwesakhiwo esivikela imvelo esihlaza.
(6) Uma kuqhathaniswa nokwakheka kokhonkolo okwejwayelekile kwezitini, ukusetshenziswa kwamandla okuphelele kwensimbi kukhanya ngama-30% kanye nokukhishwa kwe-carbon dioxide kuncishiswe ngama-67%.
Ngokuya ngemiphumela yokufaka isicelo, izindleko zokwakha zensimbi ekhanyayo yensimbi endaweni yokuzamazama komhlaba nesisekelo senhlabathi esithambile sincane noma silingana kunaleso sohlelo lwesakhiwo sikakhonkolo esiqinisiwe, esinokuncintisana okuqinile. Uma kubhekwa ukusetshenziswa kwesikhathi eside, ukuthambekela kokuthuthuka kanye nezidingo zokuvikelwa kwemvelo, i-villa yensimbi ekhanyayo inethemba elihle lentuthuko kanye nesidingo esikhulu semakethe, okuzoba kancane kancane kube "indawo yokuthengisa" emakethe yezindlu. Yize izindlu ezincane zensimbi zingasetshenziswanga kabanzi eChina, sikholwa ukuthi esikhathini esizayo esiseduze, izindlu zensimbi ezikhanyayo zizoqhakaza yonke indawo eChina.